Nhọrọ nke akụkọ akụkọ akụkọ maka June | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nhọrọ nke akụkọ akụkọ akụkọ maka June
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ, oké ụjọ
June, ọnwa ọhụrụ na ọgụgụ ọhụrụ dịgasị iche iche iji were anyị na ezumike ọzọ. Nke isiokwu dị iche iche, nke a bụ nke m nhọrọ nke 6 aha nke akụkọ ihe mere eme, nwa, ihe omimi na akwụkwọ akụkọ jọgburu onwe ya na nyocha akụkọ ifo banyere kpakpando ihe nkiri ahụ na nwanyị mara mma nke bụ Hedy Lamarr.
1 Ubi nke ebube - Pedro Santamaría
2 Amụma - Rosa Blasco
3 Mgbe - Stephen King
4 Ndị na-agwọ ọrịa - Emanuela Valentina
5 N'etiti abalị - Mikel Santiago
6 Ezigbo Okpukpo - Roberto Lapid
Ubi nke ebube - Pedro Santamaría
Pedro Santamaría na-ewetara ọhụụ ọhụụ mgbe nke ikpeazụ ka na-adịbeghị anya, Akpa nke Rome. Ọ na-eweghachi anyị na Antiquity ịgwa anyị akụkọ ọzọ edobere na afọ Udue nke 450 C. Na Huns nke Attila ha emeriwo ma merie ugboro ugboro Alaeze Ukwu Rom nke Ọwụwa Anyanwụ, nke dịịrịrịrị ebere ma na-akwụ ha ụtụ.
Flavius ​​AetiusGeneral nke ndị agha ọdịda anyanwụ, o doro anya na n'oge na-adịghị anya ọ ga-abụ oge ha. Na mgbakwunye, mpaghara Africa bara ọgaranya adaba n'aka ndị Vandals, Swabians na Bagaudas ewerela Asụsụ Hispania na ndị Goth guzobere obere ala-eze gburugburu Toulouse. N'elu ya, na Ravenna, ebe bụ ụlọ ikpe nke ndị na-adịghị ike Valentinian nke atọ ọ bụ akwụ akwụ na aghụghọ. Yabụ Aetius maara na ọ bụrụ na enwere ohere ịzọpụta ihe fọdụrụ na Rome, na ya na ndị iro mbụ ya, Theodore goth, ihu ìgwè ndị Attila.
Amụma - Rosa Blasco
Rosa Blasco sitere na Alcañiz nke Teruel, obu ezie na o na aru oru dika dibia ezi na ulo na Tudela, oru o jikoro ya na akwukwo. O dere Atlọ sanatorium nke Provence y Ọbara na-ezighi ezi. Ugbu a, ọ na - ewetara akụkọ ọhụrụ a na ndị na - akwado ya, ndị ọkachamara na - ahụ maka ọdịnihu Simonetta gboo na kọmishọna Dario Ferrer, ndị ga-enyocha okwu ụfọdụ gburu ndị dọkịta na Menorca.
Emechaa - Stephen King
Kedu ihe ụbọchị ndị a ga-enweghị akwụkwọ nke Stephen Stephen? Ya mere, aha a na-aga n'ihu nke kpakpando Jamie conklin, bụ naanị otu nwa nke nne naanị ya na-azụ ụmụ, onye chọrọ ịmụ nwa naanị ya. Ma ọ na-enyo na a mụrụ ya na a ike karịrị nke mmadụ nke a n’enye gi ohere ihu ihe ndi n’enweghi ike ma choputa ihe ndi ozo n’amaghi. Site na mmekorita ya na onye nyocha nke Ngalaba Uwe Ojii New York, onye na-amanye gi izere ndi onye okacha amara na-eyi egwu ịwakpo ọbụna ili, Jamie nwere ike ịkwụ nnukwu ụgwọ maka ike ahụ.
Ndị na-agwọ ọrịa - Emanuela Valentina
Anyị nwekwara nke a thriller enịm ke edem edere Italy. Anyị nọ n’afọ 2019 n’obere obodo dị n’elu ugwu na-agbakọ maka iru uju maka nwatakịrị nwanyị a hụrụ ọkpụkpụ ya n’ọhịa, afọ iri abụọ na abụọ mgbe ọ tufuru. O ruru ya Sara romani, onye ogwugwo na-aga nke ọma n'ịwa ahụ, bụ onye na-alọghachighị kemgbe ọ bụ nwata ma ugbu a jikọtara ya na ndụ gara aga nke ọ gbapụrụ Ma mgbe ahụ na-apụ n'anya nwata nwanyị akpọrọ Rebecca, Onye bu onye ikpe azu nke omenaala ochie nke ndi n’ewe ogwu. Na Sara ga-ahapụrụ uche ya n’ule iji chọpụta ihe gaara eme.
N’etiti abalị - Mikel Santiago
Michael Santiago laghachi na Illumbe, na obodo efu nke Basque Country ebe o debere akwukwo ya mbu, Onye ụgha. Ugbu a, ọ na-akpọghachi anyị azụ na XNUMXs, ruo n'abalị nke egwu egwu nkume ebe nwa agbọghọ furu efu. N'abalị ahụ bụkwa njedebe nke ndị otu na ndị enyi si Diego Letamedia, otu kpakpando kpakpando na-agbadata onye, ​​mgbe nke ahụ gasịrị, hapụrụ ma bido ịmalite ọrụ nke ọma. Ndị uwe ojii ahụ jisiri ike chọpụta ihe merenụ Lorea, nwa agbọghọ na-efu efu na enyi nwanyị Diego, bụ onye hapụrụ egwu ahụ ngwa ngwa.
Ugbua ugbu a, na imata na otu onye otu ndị otu ahụ nwụrụ na a iju oku, Diego ga-ekpebi ịlaghachi Illumbe. Ighaghachi na ndị enyi ochie ga-esi ike ma, na mgbakwunye, a na-enyo ugbu a na ọkụ a nwere ike ọ bụghị na mberede.
Mmasị ezughị oke - Roberto Lapid
The Argentine edemede Roberto Lapid awade a akwụkwọ dabeere na ihe ndị mere eme banyere ndụ nke Hedy lamarr, ọ bụghị naanị onye na-eme ihe nkiri na kpakpando nkiri, mana nwanyị mara mma ma maa amamiihe, isi na akụkọ ihe mere eme nke narị afọ nke XNUMX. Na mgbakwunye na ọrụ ihe nkiri ya, ọ gụrụ akwụkwọ injinịa ma chepụta ma mee ka patenti a usoro nkwukọrịta na teleguide torpedoes ma hụ na kọntaktị n'etiti ndị mmekọ n'oge agha ahụ. Ọ bụ na teknụzụ a ka sistemụ anyị ji arụ ọrụ taa maka ekwentị mkpanaaka, Wi-Fi, Bluetooth na GPS dabere.
Ya mere, anyị nwere Friedrich Mandl kwuru, onye Austrian na-eto eto nke weghaara ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke nna ya bibiri ma n'ime nanị afọ iri na-achịkwa iji mee ka otu n'ime ọgaranya Europe. Ma ịhụ onye na-eme ihe nkiri Izuchukwu Kiesler na ihe nkiri na-ahụ ya n'anya ma ha lụọ. Agbanyeghị, mgbe mmekọrịta ahụ dakpọrọ n'ihi ekworo na ekwesịghị ntụkwasị obi, ọ kpọchiri ya na nnukwu ụlọ ya na Salzburg.
Hedy ga-ejikwa gbapụ na ga-agba oso gafee Europe. Ọ bụ n'ụgbọ mmiri na-aga New York ka ọ na-ezute Louis B Meyer, Onye isi ala nke Metro Goldwyn Meyer, onye na-ewe ya ọrụ ozugbo wee gbanwee ya ka ọ bụrụ Hedy Lamarr.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nhọrọ nke akụkọ akụkọ akụkọ maka June
Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na-adabere n'ihe ndị mere eme